Posted by Tranquillus | Feb 10, 2018 | Tababarka internetka
Soo bandhiga Udemy Faransiiska: Koorasyo ​​toos ah oo online ah
Aad ayay u adagtahay in la isdifaaco fikrad khuseeya, ama xitaa ka sii daran, marqaati dhab ah oo asal ah oo ku saabsan Udemy France. U fiirso naftaada adiga oo waydiinaya makiinad raadin ku saabsan! Waxaad shaki la'aan ku dhici doontaa maqaallo yar oo maqaalo ah oo ku dhowaad dhammaan qoraalada si gaar ah loogu talagalay akhristayaasha Ingiriisiga ku hadla.
Uma baahnid in la yiraahdo, haddii aadan si fiican u baran laba luqadood ... Midkoodna lagama yaabo inuu kaa caawiyo sidii aad u heli lahayd fikrad cad oo ah awooda dhabta ah ee Udemy, iyo sidoo kale tayada guud ee koorsooyinka interneedka laga helo.
Moodle MOOC ah oo sii waday inuu sii ballaariyo walina waxba lama yaqaan
Udemy waa shirkad maalinba maalinta ka dambeysa sii kordheysa, oo aan waligeed ka joogsan in laga hadlo saxaafadda. Hal abuur iyo hami, waa tartame weyn ee qaranka iyo hogaamiyaha "Made in France": OpenClassRoom. Waxaa laga aqoonsan yahay adduunka oo dhan, waxay si aan macquul ahayn u soo jiidanaysaa arday badan oo ka mid ah darajooyinkeeda, dhammaantoodna doonaya inay wax ku bartaan qiimo jaban.
Laakiin xitaa haddii dalabka la soo jeediyay uu u muuqdo mid aad u soo jiidasho leh, aan suurtagal ahayn inuu isdiiwaangeliyo iyada oo aan marka hore la waydiin ra'yiga kuwa ku guulaystay, ama hubiyo sumcad wanaagsan. Sidaa daraadeed, in la isku dayo in la xakameeyo maqnaashaha iyo feejignaan la'aanta macluumaadka ku yaal Net, halkan waa soo bandhigid dhamaystiran ee Udemy.
Waa maxay Udemy?
Udemy waa koorso Mucaarad-furan oo Muusik ah oo Maraykan ah (MOOC). Haatan mar dambe ma joogo dhinaca kale ee Atlantic. On site ah, waxaan ka heli kartaa dhammaan koorasyo ​​koorsooyin ku saabsan dhammaan maaddooyinka suurtagalka ah iyo aan la qiyaasi karin, mid kasta oo leh toban ama xitaa labaatan euro oo keliya.
Dukaamadu waxay ku dhow yihiin koorsooyinka "dhimista" ee e-barashada
Sababta looga hadlayo Udemy ee Maraykanka iyo shaki ku jiro liistada titanic. Waqtigaas ayaa la qoray, Udemy France waxay ku faraxsan yihiin tababarka 55 000 meel u dhow miiska.
Nambarka rikoodhka, oo ku dhawaad ​​qiyaasta, gaar ahaan marka la barbardhigo tirooyinkan kuwa la tartamaya ee qaybaha. Guud ahaan, FLOATs (MOOCs Faransiiska - Tababarka Online-u-furan ee Dhammaan) ayaa ku adkaata in ka badan koorasyo ​​konton iyo wakhti siman ah.
Ka waran bilaabida adoo koorsadaada ku dhajinaya Udemy?
Waxaa laga yaabaa inaad haysatid wax aad baratid adduunka intiisa kale? Haddii aad khibrad u leedahay, taas oo ku saabsan aag aad ku jeceshahay, waa inaad ogaataa inaad haysato suurtogalnimada inaad ku bixiso tababarkaaga internetka ee bartaada.
Xaqiiqdii, Udemy, qof waliba wuxuu iska diiwaangelin karaa sidii tababare oo wuxuu bixinayaa koorsooyinkooda. Qaar ka mid ah macalimiinta MOOC-da si aad u wanaagsan ayaa loo raacay xitaa maareynaya inay helaan gunno aad u fiican. Waa xaqiiqda ah in qof waliba la wadaagi karo aqoontiisa uu Udemy u oggolaaday inuu sii ballaariyo maalin kaste maalin kaste.
Waa hab weyn oo lagu baraarujinayo aqoontaada kharash yar
Ma aha sababta oo ah UDM France waxay soo dhaweyneysaa hub furan dhammaan dadka doonaya in ay soo jeediyaan MOOC-ga, in kuwani ay yihiin tayada dhexdhexaad ah. Taasi waa sida iska cad. Ma aha wax aan caadi ahayn si aad u heshid su'aalaha qaar. Faa'iidada koorsooyinka xulashada ee qaansaradu waa inay suurtagal tahay in wax walba oo ku saabsan Udemy wax barto.
Waxaa jira boodbood koorsooyin ah oo lagu barto sida wax loo sawiro, tababar lagu baranayo tababarka eygaaga ama barashada gargaarka degdegga ah. Tani waa dalab aan dhammaad lahayn, oo aan macquul ahayn oo runtii ka dhigaya Udemy tartankiisa. Ma rabtaa inaad barato aqoon cusub? Meel kasta oo aad rabto, shaki la'aan waxaad kaheli doontaa waxaad ka raadineyso barmaamijkan.
Farqiga udhaxeeya Udemy iyo Faransiiska Udemy
Haddii aad gasho oo aad doorato inaad iska diiwaangeliso nooca Faransiiska ah ee Udemy, waxaad si dhakhso leh u arki doontaa iyada oo naxdin leh in ka badan 70% koorsooyinka internetka ee aad heli karto ay ku qoran yihiin oo keliya Ingiriisi. Ha cabsanin. Wax walba waa caadi. Ha iloobin in MOOCs ay toos uga yimaadaan Mareykanka!
Tani ma aha natiijada cillad kombuyuutar ama qalad ka yimid qaybtaada markaad buuxineyso astaantaada. Waa inaad ogaataa in Udemy uu bilaabay inuu adduunka qabsado. Maxay ka caadi noqon kartaa kiiskan, marka loo eego in lagu bixiyo koorsooyin ku saabsan luqadda ugu fiican ee la fahmo adduunka?
Olivier Sinson, oo ah maamulaha Udemy France, si ay u qabtaan lixdaagadood
Ma fahmi karaa hal eray oo ku qoran Ingiriis? Ogow Olivier Sinson, oo ah madaxa Udemy France shaqsi ahaan, wuxuu mowduuca si dhab ah u qaataa. Wuxuu sidoo kale dhawaan shaaciyay inuu jeclaan lahaa, mustaqbalka fog, inuu bixiyo koorsooyin badan intii suurtagal ah Faransiiska. Sidaas darteed waa khamaar aamin ah in uusan halkaa ku joogsan doonin. Buugga ku qoran luuqada faransiiska hubaal ma joogsan doono inuu hodan ka sii kordho waqtiga.
Horeba 2017, Olivier Sinson wuxuu horeyba ula tacaalay tababarka dijitaalka si uu ula tartamo OpenClassRoom. Haddii aadan aqoonin tartankan Udemy, kama badna ama ka yar yahay hoggaamiyaha suuqa ee FLOATs ee Faransiiska. Waxaan aragnay tiro koorasyo ​​ah barashada masaafada oo sanadka oo dhan ku soo badanaya Udemy. Si kastaba ha noqotee, waxay inta badan diiradda saareen mawduuca IT, dijitaalka iyo barnaamijyada. Tan waxaa loogu talagalay in lagu qariyo barnaamijka Mathieu Nebra. Dhammaan koorsooyinkaan tababarka ah ee khadka tooska ah waxay ahaayeen, dabcan, gebi ahaanba lagu bixinayo Faransiis.
Udemy Faransiisku way ka fogtahay dhammaystirka ballaadhinta
Waxaan rajeyneynaa in 2018, Olivier Sinson uu sii wadi doono in la sameeyo ballaarinta MOOC-da Faransiis ee ku hadla mudnaanta ganacsigiisa. Xasuuso, si kastaba ha ahaatee, in aad ka caawin karto hawshan adag adigoo ku siinaya koorsadaada ku yaala barmaamijka.
Tani ma aha fursad weyn oo ay ku bilaabi karto khibrad cusub oo abaal marin leh?
Koorsooyinka Lacagaha Ah Iyo Dhammaan Mawduucyada May 14th, 2020Tranquillus
horeSidee loo hagaajin karaa boggaaga LinkedIn si sahal ah Video2Brain?
socdaMar dambe ha ku qaldamin hal qalad higgaadinta habka 'Orthodidact'